Science Fiction – MMANIME
Mobile Suit Gundam: The Origin IV – Eve of Destiny Mobile suit Gundam: The Origin Movie 04 ဒီအပိုင်းမှာတော့တော်လှန်ရေး စလိုက်တဲ့ Garma နဲ့ ဗိုလ်လောင်းတပ်သားတွေဟာ ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မှာလဲ အခြေအနေတွေ ဆက်တိုက်တင်းမာနေတဲ့ Zeon နဲ့ Federation ဟာ တစ်ကယ်ပဲ စစ်ဖြစ်တော့မှာလား Mobile suit တွေကရော တိုက်ပွဲမှာ ဘယ်လောက်ထိ စွမ်းဆောင်နိုင်မှာလဲ Federation ဘက်ကရော ဒီ mobile suit တွေကို တန်ပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ ဘယ်လိုကြိုးစားသွားမလဲဆိုတာတွေကို ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်
Mobile Suit Gundam: The Origin III – Dawn of Rebellion ဒီအပိုင္းမွာေတာ့ Zeon စစ္တကၠသိုလ္ကိုသြားမယ့္ Char Aznable နဲ႔အတူလိုက္သြားမယ့္ Casval ဟာ Zeon မွာ ဘာေတြဘယ္လိုလုပ္ဖို႔စီစဥ္ထားတာလဲ Dozle ရဲ႕ Mobile worker project ကေရာ ဘယ္လိုေတြဆက္ျဖစ္ဦးမွာလဲ Federation အစိုးရနဲ႔ Zeon ၾကား ႏိုင္ငံေရးတင္းမာမႈေတြကေရာ ပိုမိုျပင္းထန္လာၾကဦးမွာလား ဆိုတာေတြကို ၾကည့္႐ႈရမွာျဖစ္ၿပီး ဒီ Movie 03 ကေနစလို႔ ဇာတ္႐ွိန္ဟာ စၿပီးျမင့္လာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္ Translated and Encoded by Oke Hmue Ko
IMDB: 7.5/10 458 votes
Mobile Suit Gundam: The Origin II – Artesia’s Sorrow Mobile suit Gundam:The Origin Movie2ဒီအပိုင်းမှာတော့ Zabi တွေလက်ထဲကနေ လွတ်မြောက်သွားတဲ့ Casval နဲ့ Artesiaတို့ နှစ်ယောက်နဲ့ Jimba Ral တို့ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်လိုဆက်ပြီး စခန်းသွားကြမလဲ Munzo မှာ အာဏာအကြီးဆုံးဖြစ်လာတဲ့ Zabi တွေကရော Zeon Zum Deikun ရဲ့ လမ်းစဉ်အတိုင်း ပကတိလွတ်လပ်ရေးကိုအရယူဖို့ Earth Federation ကို ရင်ဆိုင်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုတွေပြင်ဆင်ကြမလဲဆိုတာ မြင်တွေ့ရမှာပါ #Translated and encoded by Oke Hmue ko
Mobile Suit Gundam: The Origin I – Blue-Eyed Casval Mobile Suit Gundam: The Origin Movie 1 Anime : Mobile suit Gundam: The Origin 1 ( Movie ) Genres: mecha,action,war drama Status:Finished Airing Studios:Sunrise Duration: 1:03:00 Movie – 1 (Blue-eyed casval) File size – 557mb #Translated_and_Encoded_by_Oke_Hmue_Ko ဒီ Movie ကနေ Gundam series တွေ စကြည့်လို့ရတယ်ဆိုပေမယ့်မကြည့်ခင် Review လေးအရင် ဖတ်ပေးစေချင်ပါတယ် Review မဖတ်ပဲကြည့်ရင် နားလည်ရခက်လို့ပါ လူသားတွေကြောင့် ကမ္ဘာကြီးဟာညစ်ညမ်းသွားပြီး ဆက်လက်နေထိုင်ဖို့ မသင့်တော်တော့တဲ့အခါမှာ လူတွေဟာ အာကာသထဲမှာ ကိုလိုနီအကြီးကြီးတွေဆောက်ပြီး ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ဲကြရပါတော့တယ် အကုန်လုံးပြောင်းရွှေ့တာမဟုတ်ပဲ လူဦးရေတစ်ဝက်လောက်ကသာ အာကသထဲကို မောင်းထုတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအချိန်ကနေစပြီး ကမ္ဘာပေါ်ကနိုင်ငံတွေ အားလုံးပေါင်းကာ Earth Federation အစိုးရကို ဖွဲ့စည်းပြီး ကမ္ဘာမြေနဲ့တစ်ကွ ကိုလိုနီတွေအားလုံးကိုပါ အုပ်ချုပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အချိန်ကနေစပြီး ...
Neppuu Kairiku Bushi Road (2013) Informations --------------- Type: Special Episodes: 1 Status: Finished Airing Aired: Dec 31, 2013 Producers: Bandai Visual, Nitroplus, Bushiroad, Orange, Bushiroad Music Licensors: None found, add some Studios: Kinema Citrus Source: Original Genres: Action, Fantasy, Mecha, Sci-Fi Duration: 1 hr. 33 min. Rating: R - 17+ (violence & profanity) Review --------- ကမ္ဘာကြီးကို shinobiလို့ခေါ်တဲ့အရာတွေက ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်ပေါ့,Shinobiဆိုတာကတော့ တခြား ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားကနေ ကမ္ဘာကိုရောက်လာတဲ့ အဆိပ်အတောက် ကောင်တွေပါ,အဲ့ဒါနဲ့ လူသားတွေကလည်း Shinobiတွေနဲ့ ...
PROMARE (2019) Type: MovieStudio: TriggerGenres: Action, Mecha, Sci-fi, Super PowerDuration: 1hr 51 min Synopsis:ကမ္ဘာ အနှံအပြားမှာ မီးကို ထိန်းချုပ်တဲ့ "Burnish" ခေါ် သန္ဓေပြောင်းလူသား တွေရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပြီး လူသားမျိုးနွယ်တွေကြား သေကြေပျက်စီးမှုများစွာ ဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါတယ်။ဒီ သန္ဓေပြောင်းလူသားတွေကြောင့် ကမ္ဘာ့မီးလောင်မှုကြီးဖြစ်ပွားခဲပြီး ကမ္ဘာလူဦးရေ 50% ခန့်ဟာ ဒီမီးလောင်ပျက်စီးမှု ဒဏ်​တွေ ကို ခံစားခဲ့ကြရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃၀ အကြာမှ ဒီလို Burnish တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Promepolis မြို့ဟာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးKray Foresight ရဲ့ ဦးဆောင်မှုကြောင့် မြင့်မားတဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့ အလွန်တိုးတက်တဲ့ မြို့တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်Galo Thymos ဟာ Promepolis မြို့ရဲ့ Burning Rescue ဆိုတဲ့ မီးသတ်ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့မှာ ဘယ်အရာကိုမဆို တက်တက်ကြွ​ကြွလုပ်ဆောင်တတ်တဲ့ ကယ်ဆယ်ရေးတပ်သား လူငယ်တစ်ယောက်ပါ။မြို့တွေကို မီးရှို့ဖျက်စီးတတ်တဲ့"Mad ...
Akira Old but goldဆိုတဲ့စကားဆိုတာကြားဖူးကြမှာပါ Movieတွေထဲမှာဆိုရင် Godfather, shawshank redemption,forest gumpစတာတွေက တကယ်ကိုold but goldပါ အဲ့ဒီလိုပဲ animeထဲမှာကောမရှိဘူးလားမေးရင် သိပ်ရှိတာပေါ့လို့ဖြေရပါမယ် တကယ်ကိုoldပြီးgoldဖြစ်လွန်းလို့ Hollywood ကတောင် အဲ့animeတွေရဲအငွေ့အသက်ကိုယူပြီးရိုက်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ် ဥပမာပေးရရင်တော့ Ghost in the shellရဲ့ဇာတ်လမ်းကျောရိုးလောက်ယူပြီးmatrixဆိုတဲ့ကားထွက်ခဲ့သလို Vampire hunter Dရဲ့အငွေ့အသက်ပါတဲ့Van Helsing Paprikaဆိူတဲ့animeရဲ့အငွေ့အသက်တွေပါတဲ့ Inception Perfect blue animeရဲ့လွှမ်းမိုးမှူတွေပါတဲ့ Black swanတို့လိုနာမည်ကျော်ဟောလီးဝုဒ်ကားအကျော်အမော်တွေအများအပြားပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ် အဲ့လိုပေါ်ထွက်ခဲ့ရာမှ Sci fi,supernaturalဇာတ်ညွှန်းတည်ဆောက်ပုံကိုတစ်ဆစ်ချိုးရုံမက New eraတစ်ခုပါထွက်ပေါ်လာသည်အထိစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့animeကတော့ Akiraပါပဲ Akiraရဲ့ဇာတ်လမ်းတည်ဆောက်ပုံကိုနမူနာယူပြီး Looper,midnight special,chronicleတို့လိုကားမျိုးတွေအများအပြားထွက်ခဲ့ပါတယ် ဒါတင်မကဘူး မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရဲ့ screamသီချငိးအဆုံးမှာပါခဲ့သလို Kayne Westကလည်း သူ့အကြိုက်ဆုံးanimeတွေထဲမှာထိပ်ဆုံးမှာပါတယ်ပြောခဲ့ဖူးပါတယ် Ratingအနေနဲ့ပြောရရင်လည်း Animeတွေကိုတော်ရုံတန်ရုံ8ကျော်တဲ့အထိရတယ်ဆိုတာရှားတဲ့ IMDb မှာ 8.1/10 Rotten Tomatoesမှာ 87% My anime listမှာ 8.2/10ထိရထားပါတယ် ဒီကားကို admin Ken Kenကပြန်ပေးထားပြီး အညွှန်းကို Dr.Nyan ကရေးပေးထားပါတယ်
IMDB: 8.1/10 57154 votes